Murwiri weKodzero dzeVanhu, VaPatson Dzamara, Vashaya neChirwere cheGomarara
Murwiri wekodzero dzevanhu, uye vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance, VaPatson Dzamara, vashaya nechirwere chegomarara.
VaPatson Dzamara, avo vanga vari munin’ina wemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura, VaItai Dzamara, vashaikira mune chimwe chipatara muHarare uko vanga vakatarisirwa kuvhiyiwa nhasi mushure mekubatwa chirwere chegomarara, kana kuti colon cancer.
Munin’ina wavo, VaPardon Dzamara, vati mukoma wavo ashaya neChitatu mangwanani, uye vanhu vakaungana kuGlenview.
Imwe nhengo ye Occupy Africa Unity Square, VaCharles Nyoni, avo vairatidzira pamwe naVaItai Dzamara, vati varwadziwa zvikuru nekuti VaPatson Dzamara vashaya vasati vaziva kuti chii chakaitika kumukoma wavo.
Imwe shamwari yemufi, VaPride Mukono, vatiwo nyika yarasikirwa negamba munyaya yekurwira kodzero dzevanhu. VaMukono vatiwo zvinosuwisa kuti mufi asiya vana vanoda kuchengetwa kusanganisira vana vaVaItai Dzamara.
Mutungamiri webato reLabour Economists and Afrikan Democrats, Muzvare Linda Masarira vatiwo varwadzikana zvikuru nekuti nyika yarasikirwa nemunhu anga akazvipira kufa achirwisa kuti azive kwakaenda mukoma wake.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vatiwo bato ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nenhengo yeNational Executive yanga iri gamba rekurwira kodzero dzevanu.
Mufi akatanga kuzivikanwa zvikuru muna 2015 zvichitevera kupambwa kwakaitwa mukoma wake, VaItai Dzamara, muna Kurume 2015.
VaPatson Dzamara vaiga vakatungamira kuratidzira nechinangwa chekuti hurumende iferefete zvakaitika pana mukoma wavo, uyo vashaya vasingazivi kuti vari kupi.
Vakambopambwa vakatochwa vari mumaoko emapurisa, uye kusungwa kakawanda vachirwira kodzero dzevanhu.
VaDzamara vari kutarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwaMutoko.